Keto Guru တရားဝင် site: ဝယ်ပါ, စျေးနှုန်း, ဖွဲ့စည်းမှု effervescent တက်ဘလက်, သုံးသပ်ချက်များ.
Effervescent တက်ဘလက် Keto Guru
Keto Guru effervescent တက်ဘလက်များကိုမြန်မာပြည်တွင်ဝယ်ပါ။
Keto Guru ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့
သဘာဝအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်အတူလျှော့စျေး Bio ပါးလွှာဖြည့်စွက်ငါးဆယ်% ။$ 39.60 အတွက်အစားအသောက်ဆေးပြားကိုဝယ်ပါ။ဒီနေ့သာ
အသုံးပြုသူများ၏သုံးသပ်ချက်များ Keto Guru
Keto Guru effervescent တက်ဘလက်များသည်ခန္ဓာကိုယ်အားအလွယ်တကူအဆီကျစေပြီးဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုမြန်စေသည့်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အလေးဆုံးသောထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ငါမကြာခဏသူတို့ကိုငါအဝလွန်ဖောက်သည်အကြံပြု, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သဘာဝဖွဲ့စည်းမှု၏ကျေးဇူးကြောင့်, ဒီထုတ်ကုန်ကောင်းစွာဒဏ်ခံသည်နှင့်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်ပါဘူး။
Keto Guru - ပိုလျှံသောကိုယ်အလေးချိန်ကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်ဆန်းသစ်သောအဖြေတစ်ခု
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်သောစာရင်းများအရပိုလျှံသောပြနာသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအချိုးအစားပိုများလာသည်။၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေး ၁% အောက်အဝလွန်နေပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိသည်။၁၉၇၅ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာအဝှမ်းအဝလွန်သူများသည်သုံးဆတိုးလာခဲ့သည်။
ပိုလျှံသောကယ်လိုရီများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများမရှိခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီပိုလျှံခြင်းသည်ကျန်းမာရေးကိုဆိုးဝါးစေသည်။အလွန်အကျွံကိုယ်အလေးချိန်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်, အဆစ်အပေါ်ဝန်တိုးပွားစေခြင်း, အဆစ်နှင့်အဆစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦး တည်။ထို့အပြင်အဝလွန်ခြင်း၏သဘာဝအဖော်များမှာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်၊ နှလုံးရောဂါနှင့်ဆီးချိုရောဂါနှင့်ကင်ဆာအမျိုးမျိုးတို့၏ပြproblemsနာများဖြစ်သည်။
ကလေးများနှင့်လူကြီးများတွင်အပိုအလေးချိန်ကိုရှာဖွေရန်BMI - အမြင့်၏အချိုးနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုသုံးပါ။အမြင့်ကိုကီလိုဂရမ်နှင့်အမြင့်နှစ်မီတာနှစ်ထပ်ရှိသင့်သည် (kg / m2) ။
အကယ်၍ ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်းသည် ၂၅ ထက်ကျော်လွန်ပါက WHO ၏မူဘောင်အရ၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်သည်။အကယ်၍ အမြင့်နှင့်အလေးချိန်အချိုးသည် ၃၀ ထက်ကြီးသည်သို့မဟုတ်အထက်ရှိလျှင်၎င်းကိုအဝလွန်ခြင်းဟုသတ်မှတ်သည်။
အဝလွန်ခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်နည်းလမ်းသစ် - ဇီဝဖြစ်စဉ်ဓာတ်ကူပစ္စည်း Keto Guru နှင့်အတူ keto အစားအစာသည်သင့်အစားအသောက်များကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်သည်။
Keto အစားအစာသည်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုအဆီပိုများစေသည့်နည်းလမ်းသို့ထည့်သည်။များသောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုဂလူးကို့စ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးပြီးအဆီကိုစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်သိုလှောင်ထားသည်။အဆီလောင်ကျွမ်းမှုယန္တရားကိုစတင်ရန်သင်၏ဘိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ကယ်လိုရီကွာဟချက်ကိုအဆီများသောအစာများ (အခွံမာ၊ ပင်လယ်ငါး၊ ဒိန်ခဲစသည်ဖြင့်) ဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာများတွင်သင်သည်သင်၏အစားအစာကိုပြန်လည်ဖြတ်တောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြောင်းလဲရုံသာဖြစ်သောကြောင့်ပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေသည်နည်းပါးသည်။Carbohydrates သည်စားသုံးသည့်ပမာဏ၏ ၁၅% ထက်မပိုသင့်ပါ။ အဆီများသည်အနည်းဆုံး ၆၀% ရှိသင့်သည်။
ဤကိစ္စတွင်အသည်းသည်အဆီများကို ketones နှင့် fatty acids များအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။Ketones ကို ဦး နှောက်ကပုံမှန်ဂလူးကို့စ် (glucose) အစားထိုးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။များသောအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာအား ketosis အခြေအနေသို့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည် keto diet diet အရ ၁၀-၁၄ ရက်အရအာဟာရလိုအပ်သည်။Keto Guru effervescent တက်ဘလက်များသည်ဒီဇီဝဖြစ်ပျက်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်မှုကာလကိုမိနစ် ၄၀ အထိလျှော့ချနိုင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုလိုအပ်သောဓာတ်သတ္တုများနှင့်ဗီတာမင်များထောက်ပံ့ပေးသည်။
Keto Guru အရေးယူ
Keto Guru သုတေသန
Keto Guru ဆီအဆီများလောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းအတွက်ဇီဝဖြည့်စွက်ဆေးသည်ဆေး၏ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုသည်။သူတို့ဟာဆေးတစ်မျိုးလျှင် ၅-၃၅ ကီလိုဂရမ်ကျတယ်။
အခြားကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အထောက်အကူများထက် Keto Guru ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
Keto Guru effervecent တက်ဘလက်၏ဖွဲ့စည်းမှု
L-Glutamineကြွက်သားထဲရှိစင်ကြယ်သောပုံစံတွင်တွေ့ရသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးကြွက်သားကိုကြီးထွားစေသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်- အားကစားအပြီးတွင်ကြွက်သားများအား Lactic အက်ဆစ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကူညီပေးသည်၊ ကြွက်တက်ခြင်းကိုသက်သာစေသည်
GABA (gamma-aminobutyric acid)- ဦး နှောက်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊
Pyridoxine- ပရိုတိန်းနှင့်အဆီများ၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုပုံမှန်ဖြစ်ခြင်း၊ အာရုံကြောစနစ်၏လည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။
ပိုတက်စီယမ်- နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်ကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ဆဲလ်များကဂလူးကို့စ်၏စားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။
$ 39.60 အတွက် Keto Guru effervecent တက်ဘလက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲ။
ထုတ်လုပ်သူရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကအခုဆိုရင်ရောင်းနေပြီ။ဒီကနေ့ပဲ Keto Guru ကိုမြန်မာပြည်မှာမှာယူနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲ Keto Guru မြန်မာပြည်?
Keto Guru Motswari ၌တည်၏ Keto Guru မနော